Usayizi waphansi: 50 Sq meter
Iyathengiswa ifulethi elinamakamelo amane, elakhiwa ngo-1992, emnyango wamafulethi angu-9. Ifulethi lisesitezi sesibili, i-loggia ecwebezelisiwe engu-6 sq.m., amawindi acwebezelwe kabili, i-parquet, amakamelo angawodwa, iphaseji elikhulu, ifulethi lifudumele, lithokomele, kunamamitha wamanzi ashisayo. Omakhelwane abathandekayo, izitebhisi ezihlanzekile nezithulile. Ukushisa okuphakathi. Ingqalasizinda ethuthukisiwe, ukupaka okuhle nokumahhala, ebangeni elihamba ngezinyawo ezitolo, enkulisa, esikoleni, ezokuthutha zomphakathi ziyama, maphakathi neBhangengakwesokudla.
Xhumana nomkhangisi +7930757xxxx
улица Генерала Попова, 2к2